Bancome izinga lemiphumela kaMatric eMningi | Eyethu News
Bancome izinga lemiphumela kaMatric eMningi
‘Nakuba bengenazo izinto ezanele zokufunda, kodwa ukusebenza ngokuzinikela kothisha, bebambisene nabafundi yikhona okwenze bangasala ngaphandle ebalazweni lesifunda’
KUBONGWE impumelelo yesikole samabanga aphezulu saseNtambanana, iMningi High School, ngokunyusa amasokisi kumatikuletsheni, njengoba lesisikole sibalwa nezinye ezisebenze kahle esifundeni i-King Cetshwayo.
Okufike kwacaca ukuthi nakuba bengenazo izinto ezanele zokufunda, kodwa ukusebenza ngokuzinikela kothisha, bebambisene nabafundi yikhona okwenze bangasala ngaphandle ebalazweni lesifunda.
Ekhuluma kulomcimbi onguthishanhloko wesikole, uMnuz. Harris Shabalala uthe, yize behlangana nezinselelo minyaka yonke, kodwa abakaze batheneke amandla, okuthi nabo babalwe njengezinye izikole ezihamba phambili.
‘Sinohlelo esilulandelayo lokuthi sisebenze kusukela ekuseni kuze kuyophuma isikole. Siphinde sigweme nokuthi kube nemizuzu elahlekayo ngokungenasidingo.
‘Siphinde futhi sigqugquzele abafundi ukuthi, ababe nezinqumo ngezimpilo zabo, ngokuthi babambisane nabazali babo emakhaya, ukuze babe nesikhathi sokufunda esanele, ikakhulu ngezimpelasonto,’ kuqhuba uthishanhloko.
Ubuye waphonsela abafundi bakulonyaka inselelo yokuthi benze njengabafundi bangonyaka odlule, ukuze bagcine igama lesikole endaweni efanele.
Obebongela abafundi bangonyaka odlule, uJabulani Sibiya utuse othisha abebezimisela, abanye babo beze balale esikoleni ngezimpelasonto ukuzobafundisa, nokubenze basheshe baqede umsebenzi wonyaka, nokubanike isikhathi esenele sokubuyekeza wonke umsebenzi.
Ube esedlulisela isifiso sabo esikhulu kubafundi balonyaka ukuthi bangagudluki ohlelweni abalusebenzisile, ngonyaka odlule lokubambisana nothisha.
Bamchaze njengeqhawe uMama Wesizwe